fitbit zvishandiso zvisingawirirane kune mafoni anofambiswa ne android 9 pie; edza iyi workaround
Kuru Nhau & Ongororo Zvishandiso zveFitbit zvisingawirirane nefoni dzinofambiswa neApple 9 Pie; edza iyi workaround
Zvishandiso zveFitbit zvisingawirirane nefoni dzinofambiswa neApple 9 Pie; edza iyi workaround
Vatakuri veFitbit vane mhanza yekuve mumwe we .1% yevanoshandisa Android nefoni inomhanya Android 9 Pie , vari kuita rombo rakaipa mune imwe nzvimbo. Zvigadzirwa zveFitbit zvinoita kunge hazvidi & apos; hazvidi kuyananisa nemaoko ekubatira anomhanya yazvino uye yakakurisa Android kuvaka. Vazhinji vevaridzi veFitbit vakakwenenzvera foramu yekambani yekubatsira kuti vanyunyute kuti kubvira vachivandudza mafoni avo kuApple 9 Pie, havagone kuwana mudziyo wekukwazisana nemaFitbit ekupfeka.
Fitbit inoti inoziva mamiriro acho ezvinhu, uye inoratidza kuti vashandisi vagadzirise iyo Fitbit app kune vhezheni 2.76.1, asi izvo hazviite kunge zvinoshanda. Panzvimbo iyoyo, pane workaround iyo yakatenderera yakatenderedza nharaunda yeFitbit uye iri mari yemafiripi ekuti ingakubatsira here. Asi kudzamara Fitbit yaburitsa gadziriso (uye iyo kambani yanga iri pasi redhiyo kunyarara kwevhiki mbiri ikozvino), iwe unogona zvakare kupa iyi pfuti:
Vhura iyo Fitbit app pane yako Android foni. Tanga sync pane iyo app (ichati 'kutarisa ...').
Enda kune zvigadziriso zveBluetooth, sarudza 'Pair chishandiso chitsva,' uye sarudza iyo tracker sekunge kuti unoibatanidza kekutanga
Dzokera kuapp, uye Sync ichapedziswa.
Nepo vamwe vakawana matanho ari pamusoro matatu ekushanda, vamwe havana & apos; t. Uye vamwe vakafanirwa kuyedza iyi workaround kakawanda vasati vabudirira. Saka kana pakutanga iwe ukasabudirira, edza, edza zvakare. Uye tinotarisira kuti Fitbit ichakurumidza kuparadzira gadziriso vasati vashandisi veApple vatange kugadzirisa mafoni avo kuApple 9 Pie.
chinyorwa 7 kana s7 pamupendero
Pixel 6: Mushure memakore gumi nematatu, Android iri kuzowana yayo iPhone
WSJ: Hapana Kubata ID yeiyo iPhone 8, asi nyowani yekumeso-yekuziva ficha inogona kuiswa
US Cellular inotanga kutengeswa kweChishanu Chishanu: yemahara iPhone 11, Galaxy S10e, chengetedza hombe paPixel 3
Apple inogona kuburitsa iyo iPhone 13 munaGunyana 24, muongorori anopa zano chiitiko chezuva
Apple Kuona Akateedzana 1 Ongororo
Microsoft's Surface Pro 7 ikozvino $ 400 yabviswa paBestBuy uye inosanganisira kavha yekhibhodi
Deal: Samsung Galaxy Tab A inodhura isingasviki $ 200 paGood Buy
Apple iPhone 6s Plus vs Motorola Moto X Yakachena
Pano & apos; s Android 6.0 Marshmallow pane iyo Samsung Galaxy Note 4 mukuita (vhidhiyo)